စွတ်ကျားတို့၏ပေါင်ကို . . .လှန်ထောင်းခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စွတ်ကျားတို့၏ပေါင်ကို . . .လှန်ထောင်းခြင်း
စွတ်ကျားတို့၏ပေါင်ကို . . .လှန်ထောင်းခြင်း
Posted by alinsett on Mar 13, 2014 in Creative Writing, Critic, My Dear Diary | 45 comments
ပတ္ရမ္းျခင္း အလင္းဆက္ ေျပာခ်င္တဲ့စကား
ဟိုငေးးး ဒီငေးး ငေးတတ်မောတတ်တဲ့သူရရဲ့ မြင်ကွင်းထဲကို ရောက်ရောက်လာတတ်တဲ့အထဲမှာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဂေါက်တောက်တောက် လူတချို့လည်း ရှိနေတယ် ။
အဲဒီ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ဆိုတာ ယောကျာ်းလျာ လို့ ခေါ်တဲ့ ယောကျာ်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့ မိန်းမတချို့ပေါ့ ။
ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေ ပြောသလိုပြောရရင်တော့” ဘောပြား ”
ပေါ့ဗျာ ။ အဲဒီ စကားလုံးက ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ ဆိုတာ တွေးကြည့် သိနိုင်တာမို ့. . . အဲဒီ စကားလုံး ရင့်ရင့်မည့်မည့်ကြီးတော့ မသုံးတော့ပါဘူး ။
သူရကတော့ အဲဒီလို ယောကျာ်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်တွေကို ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်းမသိလို့
” အစ်ကိုကြီးအစ်မကြီး ” လို့ ပေါင်းခေါ်နေကျ ။
သူတို့က စွတ်ပြီး ကျား ထားရလို့
” စွတ်ကျား ” လို့ လည်း ခေါ်ချင်သား။
အခုတလောလည်း အဲဒီ အစ်ကိုကြီး အစ်မကြီးတွေ ပိုများ များလာသလားလို ့. . .။
တွေ ့ရများလာတော့ . . .
သူတို့ကို မြင်မိတိုင်း သူရကလည်း ဟိုတွေး ဒီတွေး တွေးမိပါလေရော. . . .
သူရတို့ အိမ်နားမှာလည်း အဲဒီလို စွတ်ကျားတစ်ယောက်မကရှိတယ် ။
အဲဒီထဲက တစ်ယောက် ဆိုရင် . . .
သူ ့ကိုယ်သူ တကယ့်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လို ပြင်ဆင်ပြီးနေတာဗျို ့။
သူ ့အဒေါ်က ကုန်စုံဆိုင်လေး ဖွင့်ထားတော့. . .အဒေါ်ကို ကူလုပ်ပေးနေတာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်လို ပါပဲ ။
ဈေးထဲကနေ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဆန်တွေ ဆီတွေ ဘာညာသာလကာတွေကို ထမ်းဟယ်ပိုးဟယ်နဲ့ . . .
သူ အဲဒီလို အလေးကြီးတွေ ထမ်းပိုးလာတာ မြင်တိုင်း . . .
လမ်းလျှောက်ရင် ယောကျာ်းလေးလိုဖြစ်အောင် ကားတားကားတားနဲ့ ပုဆိုးကြီး မမ လျှောက်တိုင်း . . . သူရတော့ ရီတာပဲ။
” သူ ့ခံယူချက်အမှားရဲ့ ဒဏ်ကို သူခံနေရတာ ” လို့မြင်မိလို့။
သူ ့ကိုယ်ကိုသူ ယောကျာ်းလို့ခံယူထားတော့. . .ယောကျာ်းလို လုပ်ရကိုင်ရ ရှာတာ ။ ပင်ပန်းမှာပဲ ။
တကယ့်တကယ်မှာ မိန်းမတစ်ယောက် ရဲ့ခွန်အားပဲ
သူ ့မှာ ရှိတာကိုးးး ။
ပြီးတော့ ယောကျာ်းတစ်ယောက် လို့သူ ့ကို ပတ်ဝန်းကျင်က ထင်မြင်နေအောင် ဟန်ဆောင်နေပြရတာလည်း ပင်ပန်းမှာပဲ လို ့. . .
သူ ့ကိုယ်သူ ယောကျာ်းလေးနဲ့ တူလွန်းမက တူအောင် ဆေးမှင်ကြောင်တွေတောင် ထိုးလာသတဲ့ ။
ဆေးမှင်ကြောင်တွေ ထိုးလာပြီးကတည်းက အကျီ င်္ကို လက်မောင်းသားတွေထိ ပေါ်အောင် ဆွဲတင်ပြီး ဝတ်ပြတာ. . .
ပုဆိုးကိုလည်း တိုသည်ထက်တိုအောင် ဝတ်တဲ့အပြင် ဒူးနားအထိ ပေါ်အောင်
ပုဆိုးကြီး မ မ ပြီး လျှောက်တာ လျှောက်တာ. . .
ခြေသလုံးက ဆေးမှင်ကြောင်တွေ . . .လက်မောင်းက ဆေးမှင်ကြောင်တွေကို မမြင် မြင်အောင်ပြပြီး ပုဆိုးကြီးမ ကားယားကားယားလျှောက်ပြရုံနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သူ ့ကို ယောကျာ်းလို့ သတ်မှတ်မယ် . . .ထင်နေပုံရတယ် ။
စွတ်ကျားကြီးမှန်း တစ်ချက်လောက် ဝေ့ကြည့်တာနဲ့ သိတယ် ။
ယောကျာ်းအတုမှန်း မိန်းမအတုမှန်း မသိလောက်အောင် နုံအနေတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့လူတွေများသော ခေတ်မှ မဟုတ်တော့တာ ။
သူတို ့ဘယ်လောက်ပဲ ယောကျာ်းနဲ့ တူအောင် တုထားပါစေ. . .
တစ်ချက်လောက် အကြည့်နဲ့အသိကို ကလစ်ပြီး scan ဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့. . .
( ဒါပေမယ့် အဲဒီ အစ်ကိုကြီးအစ်မကြီး စွတ်ကျားကြီးတွေကို ယောကျာ်းအစစ်မဟုတ်မှန်း သိသိကြီးနဲ ့. . .ချစ်သူအဖြစ်လက်တွဲနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း ရှိသား ။ တချို့ဆို လူသိရှင်ကြားယူတာမဟုတ်ပေမယ့် တစ်အိမ်ထဲအတူနေ နေကြလေရဲ ့။
အံ့ခနဲ ဩောစရာ . . .နော့ ။ သူတို့ ဘယ်လို စခန်းသွားကြလဲ မသိ ။ အဟိ။ )
( သံယောဇဉ်ကိစ္စ အချစ်ကိစ္စမို ့. . . နားလည်ပေးလို့ရတဲ့ အပိုင်း ပါပေမယ့် အတွင်းကျကျ ကိစ္စတွေကျတော့ ဘယ်လို ရှင်းယူကြမလဲ ။ တွေးကြည့်လို့မရဘူး ။ ပြေးကြည့်ချင်လိုက်တာ )
အဓိက ပြောချင်တာက . . .
အဲဒီ စွတ်ကျား အစ်ကိုကြီးအစ်မကြီးတွေ သူတို့ ကိုယ် သူတို့လည်း သိမှာပဲ လို ့။
သဘာဝအရှိတရားအရ ငြင်းမရတာက. . .
သူတို့ ကိုယ်ခန္ဓာ ဟာ ယောကျာ်းအစစ်နဲ့ လားလားမှ မတူတာကို ငုံ ့ကြည့် / သိတာပဲ နော့်. .
အဲဒါကို သူတို့ကိုယ် သူတို့သိသိကြီး မြင်မြင်ကြီးနဲ ့. . . အရှိတရား / အမှန်တရားကို ဖုံးဖိ ချိုးနှိမ်ထားပြီး …
ဇွတ်တရွတ်ကြီး ဟန်ဆောင်နေကြတာ. . . .
အရင်းအနှီးကတော့. . . .ကြီးတယ်လို့ဆိုရမယ် ။
ကိုယ့် သိမှု. . .ကို . . .
ကိုယ် ပြန်ပြီး လိမ်လည်လှည့်စားထားရတာ ရယ်. . .
ပကတိအရှိတရား ကို ဖုံးဖိပြီး
ရိုးသားမှ ုကို ဖျက်လို ့ဖျက်ဆီးလုပ် ဟန်ဆောင်ရုပ်နဲ့. . .ပင်ပန်းကြီးကြီးနေရတာ ရယ်. . .
သဘာဝ အရ. . . မိန်းမ ဣန္ဒြေ လည်း ပျောက်ဆုံး . . . .
ယောကျာ်းဘဝလည်း မပီပြင်. . .ဟန်ချက်လွဲလွဲကြီးနဲ့. . .ရှင်သန်နေရတာရယ်. . . .
အဲဒါထက်ဆိုးတာက. . . .
သူများကို လိမ်ညာလှည့်စားထားသည်ဖြစ်စေ. . .
ကိုယ့် ကိုယ် ကို ပြန် လိမ်ညာသည်ဖြစ်စေ. . .
ကိုယ်ဟာ လိမ်ညာတတ်သူ ဆိုတဲ့ အသိ ကိုတော့ အခြေခံသိအနေနဲ့ ပြန်မြင်နေရမှာပဲ . . .
အဲဒီလို ကိုယ်ဟာ လိမ်ညာ ဟန်ဆောင်တတ်သူ ဖြစ်ကြောင်း. . .
အမှန်တရားကို ဇွတ်ဖုံးဖိပြီး ဟန်ဆောင်ပြနေသူဖြစ်ကြောင်းး ကိုယ့်ဘာသာ သိနေတဲ့အခါ. . .
မိမိကိုယ်ကို မိမိ ဘယ်လိုမှ လေးစားလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ကိုယ်ပြန်လေးစားလို့မရမှတော့. . .
သူတပါးရဲ ့လေးစားမှုဆိုတာလည်း ရဖို့မလွယ်ပါဘူး ။
ခံယူချက် မှားတာပါ ။
” အမှန်သိမှု” ဆိုက်ရောက်ခြင်း မရှိလို ့. . . ခံယူချက်အမှားကြီးနဲ့ပျော်မြူးနေတာပါ ။
အဲဒီ ခံယူချက်အမှားရဲ့ ဒဏ်ကို ပြန်ခံရင်း . . .
ဘဝဟာ ကစဥ့်ကလျားနဲ့ဟန်ချက်အကြိမ်ကြိမ်လွဲရတာပါ ။
သူရကတော့. . . . အဲဒီလို ခံယူချက်အမှားဒဏ် ခံနေရသူတွေ သိပ် မမြင် မတွေ ့လိုလှဘူး ။
အမှန်တရားကို နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ကြာအောင် ဖုံးဖိထားနိုင်သလဲ. .
တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ အမှန်တရားဟာ ရေထဲက ဗူးပေါ်သလို . . . .
ဘွားခနဲ ပေါ်လာမှာပဲ. . .
ဒီတော့ အထုံစွဲ အကျင့်စွဲကြီး ရင့်သန်နေမှ ရက်ကြီးတကွဲနဲ့ အမှန်ကို ကိုယ်ကျိုးနည်း လက်ခံရမယ့်အစား …
ဟန်ဆောင်နေတာတွေကို ရပ်လိုက်သင့်ပြီ ထင်တာပဲ ။
အခု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်သိ . . .
ကိုယ့် ခံယူချက်အမှားကို ကိုယ်ဖျက်လိုက်မှ ပျက်မှာမို ့. . .
အင်းလေ. . . .
ခက်တော့လည်း ခက်ပါတယ် ။
အမှား အမှန် ဆိုတာလည်း ရုတ်တရက်ကြီး ဝေဖန်ပိုင်းခြား သိမြင်ဖို့ခက်တာကိုး ။
ဘေးလူအနေနဲ့ အမှားအမှန် ဝေခွဲနိုင်ရင်တောင် ကိုယ့်အမှန်တရားဟာ ဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးလား ကိုယ့်ဘာသာ ပိုင်းခြားဝေဖန်ဖို့ကျတော့ သိပ်မလွယ်ဘူးလေ ။
ကိုယ် မှန်တယ် ထင်ရာတွေ ကိုယ်လုပ်ရင်း ခံယူချက်အမှားရဲ့ဒဏ်ကို ခံရတာ ။
ခံယူချက်မှားလို့ခံရတဲ့ ဒဏ်ကိုတောင် . . .
”အမှားဒဏ်” မှန်း မသိနိုင်ပဲ. . .
သာယာမှုရှာ ပြီး . . .
ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ယစ်မူးနေတတ်ကြသေးတာ. . . .
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ. . . .
ယောကျာ်းတကယ် ဟုတ်သော ယောကျာ်းအစစ်. . .
မိန်းမတကယ် ဟုတ်သော မိန်းမအစစ်များ ကိုသာ. . . .
သဘာဝကျကျ မြင်ချင်မိတယ် ။
ဟိုလည်း မရောက်. . .
ဒီလည်းမရောက် . . .
မပီပြင် မပီသတာကြီးတွေ မြင်ရတာ…
စိတ် Spasm ဖြစ်တယ် ။
22 /2/ 2014 / 14 : 13 pm
ဖြူစိုင်း လူ says:
♪ ♬ ♬ ♪မမန့်ရင် မနေနိုင်တာကလွဲလို့♪ ♬ ♬ ♪
ဆိုတော့ကာ ဒညင်းခွက်ပြောတဲ့ စွတ်ကျားပေါ့
အဲ့လိုပဲ ဝိသေသ တပ်ကြည့်တာပေါ့နော်။ သူတို့တွေ သိပ်ကို ကျားဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီနေရာမှာ မေးစရာတစ်ခုရှိတယ်။ (ကျော်အပါအဝင်ပေါ့နော်) ကျားဆိုတဲ့ကျားတွေ ငါဟဲ့ကျားဆိုပြီး မဟာပုရိသစိတ်ထားကြီးတွေထားနေလိုက်တာများ ကျားဆိုတာ လုပ်သမျှ တင့်တယ်တယ်။ ငါဟဲ့ ကျား( ဂလု )၊ ငါဟဲ့ ကျား ( ဖလွတ်၊ ဖွတ် )၊ ငါသည်ကား ကျားစင်စစ်ဖြစ်တော့သကား ( ထောက်ကနဲ မြည်သံနှင့် ရှဲကနဲ မြည်သွားသည်)၊ ပုဆိုးဂွင်းသိုင်းပြီး ရပ်ကွက်ထဲ အော်ဆဲသည် (စိတ်ထဲမှာတော့ ငါ့လူပျိုရည်ပျက်အောင် ဘယ်သူမှ မလုပ်ရဲပါဘူးဆိုပြီး ယုံကြည်ချက်လဲပါသည်)။
ဆိုတော့ကာ သိပ်ကို အားကျစရာကောင်းတဲ့ ကျားဘဝပေါ့။
ကျားကို အမျိုးအစားခွဲကြည့်ရအောင်။ ခုလေးတင်ပြောခဲ့တဲ့ စွတ်ကျားဆိုတာ ထားပါတော့၊ နံပါတ်စဉ်တစ်ခုပေါ့။
တစ်ချို့ တစ်ချို့သော ကျားများလဲရှိသေးသပေါ့။
လူတစ်ယောက်ရယ်လို့ ဖြစ်လာမှတော့ ကိုယ်နှစ်သက်ရာဘဝကို ကိုယ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အတွက် နှိမ့်ချစရာလဲ မလိုသလို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချစရာလဲ မလိုပါကြောင်း။ သူ့မှာ မရှိတာကို ရှိချင်တာ လူ့သဘာဝပါ။ တစ်ချုူိ့တွေများ ကိုယ့်မှာမရှိတာလေးကို လိုချင်လွန်းလို့ ယောကျာ်းယူ၊ မိန်းမယူကြတာပဲသာကြည့်။ :hee:
အစလေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဇောက်ထိုးကြီးနေနေတာကနေ အတည့်အတိုင်းပြန်နေကြည့်ပါဦး။
လူဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ လူပါပဲ။
လူပုဂိ္ဂုလ်ကို သရော်တဲ့စာ မဟုတ်
အတွေးအခေါ်အယူအဆကို သရော်တဲ့စာဖြစ်ကြောင်း အရင် ပြောပါရစေ။
အခု ကျနော် ပိုစ့်ထဲရေးခဲ့သလောက်တော့
သူတို့ ဖြစ်တည်မှုကို ရှုတ်ချကဲ့ရဲ့တဲ့သဘော မပါပါဘူး။
သူတို့ ခံယူချက် ကို မှားတယ်လို ့ကျနော် ယူဆတယ်။
အဲဒီ အမှားရဲ့ဒဏ်အဖြစ် သူတို့မှာ ဆုံးရှုံးသွားတာတွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တယ်။
နောက်ဆုံး ကိုယ့်အရှိတရားကို ကိုယ် လိမ်လည်လှည့်ဖျားပြီး ဟန်ဆောင်ထားရတဲ့
သိမှုဟန်ချက်အလွဲကြီး လို့ယူဆလိုက်တယ်။
တခြားသူရဲ့ အယူအဆ မြင်ပုံတွေးပုံနဲ့ ကွာနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကျနော် ့ဆိုလိုချက်ကို နိဂုံးမှာ ပြထားပါတယ်။
သဘာဝကျကျနေကြပါလား လို့. . . .
လူတွေဆိုတာ ကိုယ်ကြိုက်ရာ ကိုယ်လုပ်ကြတာပဲလေ။
ကိုယ့် ခံယူချက်ကိုတော့ တော်တော်များများ မှန်တယ်လို့ပဲ ယူဆကြတာကိုး။
ကျနော်. . . . ဇောက်ထိုးနေရတာကို တခါတခါပျော်တယ်ဗျ ။
ဆိုတော့ လူပုဂိ္ဂုလ်ကို သရော်တဲ့စာ မဟုတ် လို့ဆိုထားတဲ့အတွက် အနည်းငယ် လင်းပါရစေ
(ကောက်နှုတ်တင်ပြ ဆွေးနွေးဝေဖန် ကန့်ကွက်အကြံပြု ဝေဖန်အကြံပေး အသိဖလှယ် နှီးနှောပြောဆို ပိုင်းခြားဆင်ခြင်…)
အမ်မလေးမောတာ၊ ဒီလောက်နဲ့ရပ် ဆွေးနွေးကြမယ်ကွဲ့
“ဟိုငေးးး ဒီငေးး ငေးတတ်မောတတ်တဲ့သူရရဲ့ မြင်ကွင်းထဲကို ရောက်ရောက်လာတတ်တဲ့အထဲမှာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဂေါက်တောက်တောက် လူတချို့လည်း ရှိနေတယ် ။”
ဒီနေရာမှာ နာမဝိဝေသနလေး တစ်ခုကို တွေ့လိုက်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ သဘောပါရဲ့လား စာဖတ်ပုရွက်ဆိတ်သတ်ကြီးတို့။
“ဈေးထဲကနေ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဆန်တွေ ဆီတွေ ဘာညာသာလကာတွေကို ထမ်းဟယ်ပိုးဟယ်နဲ့ . . .”
အဲ့ဒီအနေအထားမှာ ယောကျာ်းသားမရှိတဲ့ မိသားစုတစ်စုမှာ ယောကျာ်းမှလုပ်ရမယ်၊ မိန်းမမှလုပ်ရမယ် ခွဲခြားစိတ်မရှိပဲ အလုပ်ဆိုတာ လုပ်ဖို့ပဲလို့သတ်မှတ်ပြီးလုပ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုရင်ကော?????
“အဲဒါထက်ဆိုးတာက. . . .
ကိုယ်ဟာ လိမ်ညာတတ်သူ ဆိုတဲ့ အသိ ကိုတော့ အခြေခံသိအနေနဲ့ ပြန်မြင်နေရမှာပဲ . . .”
သူတို့ဟာ လိမ်ညာလှည့်ဖျားနေကြသူများမဟုတ်ပါ၊ ဖြစ်တည်ရာဘဝတစ်ခုကို မကျေနပ်စိတ်နဲ့ သူတို့အားကျရာဘဝတွေကို တက်လှမ်းချင်နေကြတာပါ။ သူတို့လဲ တစ်လတစ်ကြိမ် အတောင်ပံလေးနဲ့ဆိုတာကို သုံးနေကြရတာပဲ။ သိတာပေါ့
အဆုံးသတ် မှတ်ချက်လေးက ပိုအရေးပါတယ်..
“ဟိုလည်း မရောက်. . .
စိတ် Spasm ဖြစ်တယ် ။”
ဆိုတော့ ဆိုလိုရင်းလေးက ဂလို အနက်ဖွင့်ဆိုသဗျ
spasm (ˈspæz əm)
1.asudden, abnormal, involuntary muscular contraction, consisting ofacontinued muscular contraction or ofaseries of alternating muscular contractions and relaxations.
အနှစ်ချုပ်ဆိုရသော် ပျော့ပြောင်းသောနည်းဖြင့် ချဉ်းကပ်စေလိုပါတယ်
(ပြောလိုရင်းကို အစမှာပင် မောလို့ရပ်ထားရတဲ့ထိ ရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါကြောင်း)
သေသေချာချာ ဖတ်ရှုဆွေးနွေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ့။
စိတ်Spasm ဖြစ်တယ် လို ့ဆိုထားတာက ဆိုလိုရင်းတစ်ခုတည်းနဲ့သုံးစွဲလိုက်တဲ့စကားလုံးပါ။
ဘိုလို ထည့်မရေးဖူးလို ့ထည့်ရေးကြည့်ထားတာ။
ကျနော် ပြောချင်တဲ့ အယူအဆကို ပိုစ့်ထဲမှာ ပြောပြီးပါပြီ။
အဲဒီစာသားတွေဟာ. . . ကျနော့်အမြင် ကျနော့်တွေးပုံသက်သက်ပါလို့။
ကျနော့်အမြင်အတွေးနဲ့ သူတို့ကို ဝေဖန်ကြည့်တာပေါ့နော်။
အခု ပိုစ့်ထဲမှာ ကျနော်ရေးသွားတာ ပျော့ပြောင်းသော နည်း မဟုတ်ဘူးလားဟင်
ကျနော်က ပျော့ပြောင်းလှပြီ မှတ်နေတာ ။
ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါဗျို ့။
ဒညင်းခွက်ကို ပုံစံခွက်ကြီးထဲကနေ ဖောက်ထွက်ချင်နေသူ၊ ဖောက်ထွက်နေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြင်နေရာကနေ ကွန်ဆာဗေးတစ်ကြီးမှန်းသိလိုက်ရတာမို့အံ့ဩသွားတာသက်သက်ပါ။
ပင်လယ်မှာ လကြီးက ပိုလို့ ထိန်ထိန်သာနေပါတယ် မောင်ဒညင်းခွက်။
နေရာအမျိုးမျိုး ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြည့်ချင်လို့ပါ။
အစ်ကို ..ကျော်လဲ ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးတွေးမိနေတာ…ဒီကောင်လေးဘာဖြစ်သွားပါလိမ့်လို့..
အကြောင်းမရှိပဲတော့ ဒီပိုစ့်ကို မတင်ပါဘူး ကဆောရယ်
ဆိုတော့ကာ ပြောရင်းနဲ့ စိတ် မီးယပ်ကုန်သလိုရှိသွားပီ
ဒီနေရာမှာတင်ရပ်တယ်… ရွာသားမဟုတ်ပဲ ဝင်ပြောနေမိတာ
(ဪ… အတော်လေးတောင် ၆ ကပ်သွားပါရော့လား)
ကျနော်ကတော့ အခု စိတ်အကြောပြေသလိုလို ရှိသွားပါပေါ့။
ပို့စ် ကို ဖတ်
အောက်က ကွန်မန့် ရှစ်ခုကို ဖတ်
အဲ့သလို ဖတ် ပြီးတဲ့ အခါမတော့
သူ့ ဘဝနဲ့သူသာ ရှိပါစေတော့ ရယ်လို့
ကြည့်မရတော့ မျက်နှာလွှဲနေလိုက်တယ် အေးရော
စာဖတ်ပရွက်ဆိတ်သတ်ကြီးလို့ ညွှန်းဆိုထားမိတာ၊ စာရေးသူနဲ့ မန့်သူ ဘယ်သူမှ လူအပိုတောင်မရှိတော့တဲ့နေရာမှာ
မန့်တဲ့သူနည်းတာက စိတ်ပျက်စရာပိုစ့်မို ့နေမှာပါ။
ကျနော့်တင်ပြမှုကလည်း နည်းနည်း အရိုင်းဆန်သွားပုံရပါတယ်။
အမြင်မတော်ရင် ဒီပိုစ့်ကို ဖျက်လိုက်ပါနော်
ဒီ လို လူ တွေ အ ကြောင်း ကျ နော် ရေး ဘူး တယ် ။
တကယ် တော့ အ ခြေ အ နေ အ ကြောင်း တရား အ ရေ ရာ
ဗီ ဇ စိ တ်ကြောင့် ပါ ဖြစ် လာ ကြ ရ တာ ပါ
အပြစ် တင် လို့ တော့ မ ရ နိုင် ပါ ။
သူတို့လည်း သူတို့ယုံကြည်ချက်နဲ့သူတို ့ကိုးး
တခါတုန်းက ဂူပေါက် သုံးခုမှာ ခပ်ထွားထွား ဆိတ်ထီး တစ်ကောင် ဆိတ်မတကောင်က ဘယ်တဖက် ညာတဖက်မှာ အလယ်မှာ ခပ်ပိန်ပိန်ညှောင်ညှောင် ဆိတ်ထီးတကောင်……
ခနနေ မြေခွေးတကောင် ရောက်လာပီး အလယ်က စိတ်ပိန်ကို စားတွားဒယ်…..
ဟို မြေခွေးက သူ ့ဘာသာ စားချင်တာ စားသွားတာလေ….. သူက ဒီနေ့ဒါကို သဘောကျလို ့နေမှာပေါ့….
ဒါကို သဘာဝ မကျဖူးလို ့ပြောချင်သေးလား…..
ဘယ်ရမလဲ သက်ရှိဖြစ်နေသရွေ ့က တော့ လုပ်ချင်သလို လုပ်မှာပဲ….
သူတို ့မှာ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိတာကိုး……….
ဘောပဲပြားပြား စွတ်ပဲကျားကျား……. သူတို ့လည်း လုပ်ချင်တာ လုပ်မှာပေါ့ကွယ်……
ကျုပ်တော့ မှန်တယ် မှားတယ်လို့မပြောချင်ပါဖူး….. သို ့ပေသိ ပတ်ဝန်းကျင်လေးပဲ လိုတာပါ….
အညှော်မခံ နိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လည်း ရှိသလို…. ထုသံထောင်းသံ မခံနိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လည်း ရှိသကိုး…..
ဘာကို မှ ဂရုမစိုက်ဖူး ဆိုရင်တော့ လုပ်ချင်တာသာ လုပ်ကြပေါ့……
အားလုံးက ကံအတိုင်းပါပဲ…. ရေရှိသရွေ ့တော့ အိုးထည့်က ကျလာအုံးမှာပါ….
ပုံပြင်လေးကတော့. . . .
ဒါပါပဲကွယ်. . .
မိသားစုကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ဖြစ်သွားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုမျိုးကို ခြွင်းချက်အနေနဲ့ ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်….အိုက်ကိတ်စကို စတိုင်တခုလိုလုပ်ကျတာကို သဘောမကျဝူး
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အိုက်ဒိ စွတ်ကျားတေကို သဘောမကျဝူး
သို့သော် လင်ယူသားမွေး လုပ်ဖို့အချိန်တန်လာရင်လဲ ယောက်ကျားယူတဲ့သူက ယူကြပြန်ရော…ဘာလို့ဆို…မိန်းခလေးကို ယဲဇားလိုတွဲပီး ယောက်ကျားလေးကို သယ်ရင်းအဖြစ် ထဲထဲဝင်ဝင်ပေါင်းရာကနေ ယောက်ကျားယူချင်စိတ်ပေါက်သွားသူတေကြုံဖူးလို့
လက်စဘီယန်ဆိုတိုင်း ယောက်ကျားစတိုင်လုပ်ပြစရာမလိုကြောင်း အနောက်နိုင်ငံက လက်စဘီယန်အတွဲတေကို ကြည့်ရုံနဲ့ တင် သိနိုင်ပါသေးတယ်
ဗမာပြည်မှာတောင် ထမိန်ဝတ် လက်စဘီယန်တေ ပေါမှပေါ….အဓိက ကတော့ သူများအမြင်မှာ မိန်းမမှန်းသိသိနဲ့ ယောက်ကျားပုံပေါက်အောင် ဝတ်စားဆင်ယင်ပြုမူနေထိုင်ချင်းဟာ လက်စဘီယံထုကြီး တခုလုံးကို စော်ရကား မော်ရကား ပြုရာရောက်ကြောင်း….ထပ်လောင်းပွားများလိုက်ပါတယ်…အဟိ
မှတ်ချက် ။ ။ လက်စဘီယံစစ်စစ်များကို အနှီစွတ်ကျားများထက် ပိုရွေ့အထင်ကြီးသည်။
ကျနော်ကတော့ သူတို့ကို သဘောမကျဘူးရယ်တော့မဟုတ်
ဟုတ်လှပြီထင်ပြီး ဇွတ် ဟန်ဆောင်နေကြရတဲ့ သူတို့ဘဝ နဲ့ အယူအဆကို နည်းနည်း ဘဝင်မကျမိတာရယ် ။
ပင်ပန်းမှာပဲ လို ့. . . .
နာ့တငယ်ချင်းတွေထဲမလဲ စွတ်ကျားတွေပါပါ့။ တယေက်ကတော့ အချိန်တန်တော့ ယောင်္ကျားယူသွား သတော့။ နောက်တယောက်ကတော့ မိန်းမယူသတော့။ မိန်းမယူသူကတော့ ဒေါင်းတိမောင်းတိနဲ့ လုပ် ကျွေးတယ်။ ရွှေတွေလဲ ညွှတ်နေအောင်ဆင်ထားတယ်။ ငါကတော့ အားလုံးကို ခွဲခြားမမြင်မိဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲပေါင်းတယ်။ ထားပါလေ။
သူက ဘောပြားတွေကိုမုန်းသတဲ့။ မိန်းမရှာတွေကိုသဘောကျတဲ့။ သူ့အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲဆိုတော့
ဘောပြားဆိုတာ ယောင်္ကျားယောင်ဆောင်ထားတဲ့မိန်းမတွေမို့ မိန်းမစိတ်မပျောက်ဘူးတဲ့။ ထမင်းဟင်းချက် ဆိုတော့လဲ သူတို့ကယောင်္ကျားမို့ချက်ဖူးတဲ့။ ကဲအမြင့်တက်ဆိုတော့လဲ သူတို့ကမိန်းမမို့ တက်ဖူးတဲ့။ မြွေမြွေဆိုရင်လဲသူတို့ကရှေ့ဆုံးကပြေးသတဲ့။ ဘယ်နေရာမှအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့။
အဲ မိန်းမရှာတွေကျတော့ သူကမိန်းမမို့ ယောင်္ကျားယူသတဲ့။ အဲယောင်္ကျားကိုလဲ မယားဝတ်ငါးပါးနဲ့ညီအောင် ပြုစုသတဲ့။ ထမင်းဟင်းဆို စားခါနီးမှချက်ကျွေးတာတို့၊ ပူပူနွေးနွေးကျွေးတာတို့ လုပ်သတဲ့။ နောက် သူကယောင်္ကျားဖြစ်နေတော့ စီးပွားလဲရှာသတဲ့။ အလှပြင်တာတို့ ပန်းပြင်တာတို့ အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ။ သူတို့ယောင်္ကျားဆိုသူတွေကိုလဲ ခြေမွှေးမီးမလောင် လက်မွှေးမီးမလောင်ကော့နေအောင်ထားသတဲ့။ အိပ်ထဲမလဲ ပိုက်ဆံအပြည့်ထည့်ပေးသတဲ့။ သူတို့မပေးနိုင်တဲ့ ကာမကိုလဲ တခြားမိန်းမတွေနဲ့ကြည်ကြည်ဖြူဖြူခွင့်ပေးသတဲ့။ အဲဒါကြောင့် ဘောပြားထက် အခြောက်တွေကပိုသာပါတယ်တဲ့
ငါ့ယောင်္ကျားကတော့ ဒီဒသနကြားပြီး ငါ့မိန်းမကိုကွဲပြီး မိန်းမရှာကိုပဲ ရှာယူရတော့မလိုဖြစ်နေပြီတဲ့ အဟိ
မိန်းမလျာတွေကိုတော့ ရီရလို့ ခင်တယ်
ခင်လှိုင်တို့ ဦးအရိုင်းတို့ အခြောက်အိုက်တင်သရုပ်ဆောင်ပြီဆိုရင် အရမ်းရီမိတယ်။
သူတို့ လည်း ခံယူချက်မှားသူတွေပါပဲလို့။
ထိတွေ ့ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လားးး
ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ့်အသိနဲ့ အမှားအမှန်ကို ထိန်းမတ်ယူစေချင်တာပါပဲ ။
ဒါပေမဲ့အေရယ် ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကို စိတ်ဓါတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အောင်မြင်အောင် လျှောက်လှမ်းနေသူတွေမို့ ငါကတော့ လေးစားသအေ့။ ဘောပြားပဲဖြစ်ဖြစ် အခြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူယုံကြည်ရာကို ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေပဲ တဖက်တလမ်းအကျိုးပြုနေရင် ငါတော့ ကန့်ကွက်ရန်မရှိပါဘူးအေရယ်။ လူကိုလူလို့ပဲမြင်ဖို့လိုတယ်ထင်တာပဲ။ ကျား၊ မ၊ အခြောက်၊ ဘောပြားဆိုတာတွေက ပညတ်တွေပါအေရယ်
သင့်လျော် မျှတသော စကားပါ တဲသီ ။
ကျနော့် စွတ်ကျားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ပို့စ်က
သူတို့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိပါးစော်ကားမိသလို ဖြစ်သွားပြီလားမသိ ။
အမှန်က ကျနော် ဒီဝေဖန်ရေး ဒီအကြောင်းအရာကို ပေါတောတောစတိုင်လေး လုပ်ရေးရမှာ
ဝေဖန် သုံးသပ်ပြခွင့်တော့ ရှိမယ်ထင်ရဲ့လေ. . . ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ရေးလိုက်မိတာ
လွန်တာ ရှိရင် ဆောရီးပါ ခည
မိုး မင်းသား says:
ဘယ်သူ ့ကိုဘယ်လိုမှပြောလို ့ရတော ့မှာသေချာနေပြီတမှူတ်
ဒါကြောင် ့,. .
စွတ်ကျားတွေလည်း ထုတ်/ထောင်/ဆွဲ စေသတည်းပေါ့
သူရို ့အိုက်ရို ရုတ်ရို့ရ ရား ဟင်
စွတ်​ကျား ဘဝ ​တော့ သူတို့လဲသ​ဘောကျလိမ်​့မယ်​မထင်​ဖူး
ခန္ဓာကိုယ် လည်း မှားတယ်။ စိတ်ခံစားမှု လည်း လွဲတယ် ။
ဘရန်းဒက် ကေဇီ says:
လောက ကိုယ် ခွဲခြား ဆက်ဆံတာ လူ ၂ မျိုးပဲ ရှိတယ်။
ဘယ်သူက ဘယ်လိုဖြစ်နေနေ လူယုတ်မာ မဟုတ်ပြီးတာပဲ။
ကျနော်ကတော့ ချစ်တဲ့ သူရယ်
ဥပစ်ခါပြုရမယ့်သူရယ် သုံးမျိုးနဲ့ ခွဲခြားနေမိတာရယ်
ယုတ်မာခြင်းပင်လယ်မှာ ကောက်ကျစ်ခြင်းတွေ သယ်ပိုးပြီး ကူးခတ်နေသူ မဟုတ်ရင် . . . .
မမတို့သိတဲ့ ဥပေက္ခာဆိုတာ ဒေါသတမျိုးတဲ့ မောင်ငေးရဲ့…သဂျီးပြောဖူးတာလေး မှတ်ထားတာဘာ
လူတယောက်ကို ကောင်းတာဘဲလုပ်လုပ် ဆိုးတာဘဲဘဲလုပ်လုပ် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပစ်ထားလိုက်တာဟာ…ဥပေက္ခာမမည်ဝူးတဲ့….သောက်ညင်ကတ်လို့ လှည့်မကြည့်တဲ့ သဘောပေါ့အေ
ဥပေက္ခာအစစ်က ဘလိုဟာလဲဆိုရင်တော့ မမလဲ ရှင်းမပြတတ်တော့ဝူး…..ကို်ဖာသာ ဆက်တွေးကျိပါတော့…
ဥပစ်ခါ ဆိုတာ ကိုယ့် ဥ ကို ကိုယ် ဂရုမစိုက်ပဲ ပစ်ထားတဲ့ ခါ မ ကိုပြောတာ။
ချစ်တာ မုန်းတာလည်း မရှိအောင် ရင်ထဲ ဘဝထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။
ဟို သီချင်​း​လေ ကြား ဖူးဘူလား
” စိတ်​ စိတ်​ စိတ်​ ပါကွယ်​” ဆိုတာ​လေ သတ္တဝါ ကို စိတ်​က ဦး​ဆောင်​​နေတာဖြစ်​​လေ​တော့ သူ့​ရွေးချယ်​မှုနဲ့ သူဖြစ်​တည်​လာတာပါ ကွယ်​ ။ ဖြစ်​တည်​မှု ပဓာန ဝါဒ အရ သူ့​ရွေးချယ်​မှု အရ ဖြစ်​တည်​လာခြင်​းပါ ။ တစ်​ချို့က မှားတာ( လူအများက လက်​မခံတာကိုမှ ) သ​ဘောကျတဲ့ သ​ဘောမှာရှိတယ်​ ။လူအမျိုးမျိုး စိတ်​အ​ထွေ​ထွေ တဲ့​လေ
သူတို့အတွေး သူတို့ဘဝကိုတော့ သူတို့ဘာသာသူတို့
စွတ်ကျားက ကျားကျားယားယားအလုပ်လုပ်ရင်မဆိုးဝူး တော်တယ်ပြောရမယ်
တချို့များ ကျားပုံဖမ်းပီး နုဖတ်ပြနေတာ မစစ်စစ်တွေရှုံးပဲ ဘာမှလဲသုံးစားမရဘူး
ယက်ကွပ်ထဲဂ တချို့ကို ပြောဒါဘာ
hee. နာကတော့ အူးလေးတို့ မင်ဂါဆောင် ဗန်းကိုင်ပေးဖို့ အလှပြင်နေရင်း ပြင်ပေးတဲ့ အခြောက်ကို အနီးကပ်ကြည့်ရတာ အတော်လေး ချောတယ်တော့်.. နာ့မယ် စိတ်ထဲ နှမြောနေတာ.. ယောက်ျားလေးသာဆို အတော်လေး ကြည့်ကောင်းမှာဆိုပြီး.. ဟီး..
စွတ်ကျားကတော့ နာ ကြောက်တယ်.. ဘာလို့လဲမသိဘူး.. သူတို့ကို ကြောက်တယ်တော့်..
နာဂဓေါ့..စွတ်ကျားတွေ…ကားယားကားယား လာလုပ်ပြရင် စိတ်လေတယ်အေ…
တစ်ခါကဆို..နာ ့ရီးဇားနဲ ့နာ..တွဲလျှောက်သွားတာ…
အထက်အောက် စုန်ချည်ဆန်ချည်ကို ငမ်းတာ…
ဟိုတစ်ချိန်ကပါ. . . .